देशमा इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने हिंसा पनि चुलिएको छ। र, यसको सबैभन्दा बढी शिकार महिला र बालबालिका बनिरहेका छन्।
घोषणापत्रमा स्वास्थ्य: भोट तान्न हचुवा प्रतिबद्धता
मतदाता फकाउने होडमा पूरा हुनै नसक्ने योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रवृत्ति दलहरूले यसपालि पनि दोहोर्‍याएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव लक्षित दलका घोषणापत्र हावादारी त छन् नै, तिनले संघीयताको अवधारणा समेत नबुझेको प्रष्ट हुन्छ।
पनौतीकी कुमारी कुमारी भन्ने बित्तिकै धेरैलाई काठमाडौंकी कुमारीको मात्रै सम्झना आउँछ, तर प्राचीन नगर पनौतीकी कुमारीको पनि आफ्नै विरासत छ।
माओवादी द्वन्द्वका दागहरू बसमा पेट्रोल बम प्रहार भएको दुई सातासम्म अन्जुले पोलाइको पीडा र यन्त्रणा सहिन्। उपचारका लागि भारतीय शहर रक्सौल लगिएको थियो। उनी घर फर्किन सकिनन्, उतै बितिन्।
बागमतीमा सरकार फेरबदलमै सकियो वर्ष
कोभिड-१९ को महामारीले जनजीवन प्रभावित भएको २०७८ साल बामगती प्रदेशमा भने सरकार फेरदबलमै सकिएको छ।
स्थानीय चुनाव: यस्ता जनप्रतिनिधि चाहन्छन् ललितपुरवासी
पाँचवर्षे अवधिमा जनप्रतिनिधि गाउँमा देखै नपर्ने समस्या खेपेका दुर्गम भेगका बासिन्दा अबको चुनावबाट आफ्ना दुःख नजिकबाट बुझेर समाधान गरिदिने नेताको खोजीमा छन्।
कस्तो छ ‘मुलुकको मस्तिष्क’ मानिएको शहर?
कुनै वेला ‘मुलुकको मस्तिष्क’ मानिएको शहर विराटनगर पछिल्लो केही वर्षयता भने ओरालो लाग्दै गएको छ।
चुनाव नै प्रभावित गर्न सक्ने ‘स्यालोफेक’ र ‘डिपफेक्स’, कसरी जोगिने? सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘स्यालोफेक’ र ‘डिपफेक्स’ सामग्री फैलाएर जनमत प्रभावित पार्ने गरिएको छ। नेपालमा पनि स्थानीय चुनावमा फैलाइन सक्ने यस्ता सामग्रीबाट कसरी जोगिने?
बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अगाडि दिनहुँ किन भेला हुन्छन् युवाहरू? प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा पुग्दा बिरामीलाई भुइँमा राखेर उपचार भइरहेको देखे। अप्रेशनका लागि महीनौं पालो पर्खिरहेका बिरामी भेटे। सिटी स्क्यान र ल्याबमा हुने जाँचका लागि अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको अनि जतासुकै बिरामीको लामो लाइन देखे।
कानूनले ज्येष्ठ नागरिक मानेको उमेर समूहका आमाहरूले धानेको उद्योग ‘जब पुग्यो साठी, हातमा लाठी’ भन्ने उखानलाई चुनौती दिंदै श्रम बजारले उत्पादनशील जनशक्ति नै नमान्ने उमेर समूहका आमाहरूकै बलमा २५ वर्षदेखि नाफामा चलिरहेको छ, भक्तपुरको एउटा उद्योग।
औद्योगिक करिडोरमा १२ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ विद्युत् प्राधिकरणले सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा दैनिक १२ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ गरेपछि उद्योगी समस्यामा परेका छन्।
मुक्त भएको १३ वर्षपछि पनि हलियाका समस्या ज्युँका त्युँ सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्।
यस्ता छन् हेटौंडाको मेयरका दाबेदार अघिल्लो चुनावमा एमाले र कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यस पटक एकीकृत समाजवादीले पनि मेयरको दाबी गरिरहेको छ।
सांसद भइसकेका नेताहरू स्थानीय चुनाव लड्ने तयारीमा आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही सांसद तथा पूर्व सांसदले उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेका छन्।